Basanta Basnet: झन्डाबाहिरका कमान्डर
हिँड्नुअघि फेरि सम्झाएँ, 'आज पुस १ गते हो । फेरि पुस १ स्टाइलको काण्ड दोहोरिएला भन्ने डर लाग्या छैन ?'
नागरिक कमान्डर सर्ट ब्यान्डको रेडियो स्वाँ स्वाँ गरेझैं भित्रभित्रै लामो हाँसे, 'डर त लाग्या छ बाबु । तर पहिलेजसरी लड्न सकिएला जस्तो छैन ।'
'त्यसो भए अब नलड्ने ?' मैले सोधें ।
२०७१ पुस ५
Posted by Basanta Basnet at 4:56 AM